ရွှေနိုင်ငံ: ကျနော်တို့ရဲ့ နာရီတလုံး ရပ်တန့်သွားခဲ့ရင်
ကျနော်တို့ရဲ့ နာရီတလုံး ရပ်တန့်သွားခဲ့ရင်
ငယ်ငယ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ အောင်ခဲ့တုန်းက ဖေဖေက သူပတ်နေတဲ့ လက်ပတ်နာရီလေးကို ဆုချခဲ့ဖူးပါတယ်၊လခစားဝန်ထမ်းမို့ အသစ်ဝယ်ပေးဖို့ ခက်ခဲလွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်ပတ်နေတဲ့နာရီလေး ကျနော့်အတွက် ဖေဖေဆုချတာ နားလည်ခဲ့တာနဲ့အတူ အမြတ်တနိုးဝတ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်၊
ဟောင်းပေမဲ့ စက်အမျိုးအစားကောင်းလို့ အချိန်တော်တော်မှန်တဲ့ နာရီလေးပါ၊
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေကို နာရီလေးနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တာပေါ့ဗျာ၊
ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေ ကြာလာတော့ နာရီလေးလဲ ဇရာရဲ့သဘောကို ပြလာပါပြီ၊တမီးနစ်၊ နှစ်မီးနစ် နဲ့
တဖြေးဖြေးနောက်ကျခြင်းနဲ့အတူ နာရီပြင်ဆရာဆီ ပို့ပြီးသုံးလာရပါတော့တယ်၊
တနေ့နာရီလေး ရပ်တန့်သွားတော့ သူ့ကို ကျနော့ သေတ္တာလေးရဲ့ ချောင်ကျကျ နေရာလေးတခုမှာ ထာဝရအနားယူခွင့် ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။
ပျက်စီးခြင်းဆိုတာ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကြောင့် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပျက်သွားတတ်သလို၊ တဖြေးဖြေး အခြေအနေတွေ စုတည်လားပြီး တချိန်မှာ ထိုးရပ်သွားသလိုလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာက ကျနော်တို့ကမ္ဘာရဲ့ ဂေဟစနစ်ဟာလဲ နာရီတလုံးနဲ့ ဆင်ဆင်တူလို့ပါ၊
ကမ္ဘာ့ဂေဟစနစ်ဟာ ပူနွေးမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အတူ လက္ခဏာတွေပြလာပါပြီ၊
July ၈ ရက်နေ့က NASA ဂြိုလ်တုကနေ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂရင်းလန်ကျွန်းရဲ့ ရေခဲပြင်အရည်ပျော်မှုပုံရိပ်တွေပါ၊
Torrential rains in Rangoon have caused flash floods and disrupted transportation in several areas of the former capital, according to local residents.(2007)
Flooding at Begu(2011)
Flooding at Mandalay(2011)
Flooding at Yangon(2012)
Flooding at Yangon(27/07/2012)
Flooding at Thailand(2011)
Flooding at China(2011)
ပြောင်းပြန်သက်ရောက်မှုတွေလဲ ကမ္ဘာအနှံရှိနေပါတယ်၊သတင်းဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် ..........
in Mato Grasso, Photograph by Rodrigo Baleia, LatinContent/Getty Images
A boat rests amid debris in Manaus on September 15 2009
A floating restaurant is stranded inabranch of the Yangtze River in Chongqing Municipality, March 21, 2010. A severe drought acrossalarge swathe of southwest China is now affecting more than 50 million people, and forecasters see no signs of it abating in the short term, state media said on Friday. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: ENVIRONMENT SOCIETY IMAGES OF THE DAY) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA X01984
Lake Lanier, Georgia drought
March 4th 2007 (left), February 11th 2008 (right). Montage by Brian Hursey
A boat squeezes throughanarrow channel near Manaus on November 5.
Desperate for food, some residents have scooped up rare manatees from shallow rivers, Reuters reported.
In this file photo taken on Sunday, April. 25, 2010, Myanmar villagers carry water in plastic containers in Dedaye Cyclone Nargis ripped through Myanmar two years ago. Hundreds of millions of dollars in international aid still are needed to help Myanmar's people recover and rebuild from Cyclone Nargis two years ago, the United Nations said Friday. (AP Photo/Khin Maung Win) AP2010
Exceptional drought in Inle Lake, April 2010. View from Viewpoint Restaurant in Nyaung Shwe.
WATER, MYANMAR. Near Kyauk Padaung - rural central Myanmar. Water is gathered from wells dug out of dry river beds during the summer months. Photographer :BAGAN MAUNG
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာလဲ ဖြစ်ပျက်လာနေတာ စာဖတ်သူတို့လဲသိကြမှာပါ၊
ရေလွမ်းမိုးမှုနဲ့ရေရှားပါးမှု (Flooding and Drought) သစ်တောပြုန်းတီးမှု ကမ္ဘာမြေပူနွေးလာမျှုနှင့်
ဆက်စပ်နေပါတယ်။သစ်ပင်တောတောင်တွေ ပျက်စီးလာတဲ့အခါ မိုးရေစီးဆင်းမှုကို မတားဆီးနိုင်တော့ပဲ မြေလွာတိုက်စားစီးဆင်းစေပါတယ်၊ရေစီးနဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့ နုန်းသဲ အနယ်အနှစ်တွေကို ချောင်းတွေ၊ မြစ်တွေကြမ်းပြင်မှာပို့ချပြီး မြစ်ကြမ်းပြင်ကို တိမ်ကောစေပါတယ်၊
လူလုပ်ရေကာတာတချို့ဟာလဲ မြစ်ရေစီးကို နှေးကွေးသွားစေပါတယ်၊နှေးကွေးသွားတဲ့မြစ်ရေဟာ
မြင့်တက်လာတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်၊ လက္မများများနဲ့ ရုတ်တရက်ရွာသွန်းတဲ့မိုး၊ တိမ်ကောလာတဲ့မြစ်ကြမ်းပြင် စတဲ့အခြေအနေတွေ ပေါင်းစုံလာရင် ရေလွမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်၊
နွေရာသီရောက်ပြန်တော့လဲ သစ်ပင်တောတောင်တွေ ပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေမှာ စိမ့်စမ်းတွေလဲ ခမ်းခြောက်ကုန်ပါပြီ၊ ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ မိုးရေကို သစ်ပင်တွေမရှိရင် မြေလွှာဟာထိမ်းသိမ်းနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး၊
(images via: WhyFiles and PNAS)
Qori Kalis glacier in the Peruvian Andes is retreating atafaster rate than at any time in the past 50 centuries. It’s estimated that the glacier will vanish entirely within the next5years. Qori Kalis, the world’s largest tropical glacier, is one of many ice tongues extending down from the Quelccaya Ice Cap, the largest body of ice in the tropics.
ကမ္ဘာပူနွေးမှုဖြစ်လာတာနဲ့အတူ မြေအောက်စိမ့်ရေထုတ်ပေးနေတဲ့ တောင်တန်းကြီးတွေရဲ့ Ice Cap ဧရိယာတဖြေးဖြေး နဲပါးလာပါပြီ၊အပေါ်ကပုံမှာလိုပဲ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေပေါ်က Ice Cap
တွေလဲအရည်ပျော်ပြီး ဧရိယာနဲလာတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ သတိပေးနေကြပါပြီ၊အဝေးကြီးမှာကွာ
ငါတို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲပြောစရာရှိပါတယ်၊Ice Caps တွေဟာ ကျနော်တို့သောက်သုံးနေတဲ့
ကျနော့်နာရီလေး ရပ်သွားတော့ နာရီအသစ်လေးတလုံးပြန်ဝယ်ပတ်ခဲ့ရပါတယ်၊
ကျနော်တို့အားလုံးအမှီပြုနေရတဲ့ ကမ္ဘာ့နာရီတွေ မှားယွင်းလာပြီဆိုရင်....
ကျနော်တို့တတွေ ရေလွှမ်းမိုးမှု၊ ရေရှားပါးမှုဖြစ်တဲ့အခါ အမြန်အကူအညီတွေ ဝိုင်းဝန်းကြတာ ဝန်းမြောက်မိပါတယ်၊
မုန်တိုင်းတွေဝင်တဲ့နေရာ၊ ရေလွမ်းမိုးတဲ့ နေရာတွေမှာ နားခိုနိုင်မဲ့ Shelter တွေ ဆောက်ကြရင်ကောင်းမလား၊
သောက်သုံးရေ ရှားပါးလေ့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ သောက်သုံးရေကန်တွေ ဆောက်ကြဖို့မသင့်ဘူးလား၊
ဒါအစိုးရကလုပ်ပေးရမဲ့အရာတွေလို့ ပြောရင် ပြောကြမယ်၊
အစိုးရက လုပ်မပေးနိုင်သေးရင်ကော၊ကမ္ဘာ့နာရီတွေကတော့ ချို့ယွင်းတဲ့လက္ခဏာပြလို့လာနေပါပြီ၊
မှတ်ချက်။ ။ ဓါတ်ပုံများကို Internet သတင်းနဲ့ဆောင်းပါးများမှယူပါတယ်။
ref: Lucifer from FB
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစု...
ပေးသင့်ပေးထိုက်သည့်အခွန်အခများ ထမ်းဆောင်သွားရမည် ဟ...
အင်ဒိုနီးရှား သံအမတ် နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး အေ...
"ဂျပန် နစ်ဆန်း ကားစက်ရုံ တည်ရန် ပဲခူးတွင် မြေရှာနေ...
"မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသို့ လာရောက်လေ့လာရန် CPI ၏ ဖိတ်ခေ...
ဦးအောင်သိန်းလင်းကို ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်း...
ဆီဆိုင်တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ
အဂတိလိုက်စားမှုများမှာ တရားစီရင်ရေးနယ်ပယ်သာမက အစိုး...
အိန္ဒိယတွင် ရထားမီးလောင်မှုကြောင့် လူ ၂၅ ဦးထက်မနည်း...
သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်နှင့် သတင်းဆိုင်ရာ ရုပ်သံလိုင်း ...
"မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြ...
စဉ့်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းအား ခေါင်းလောင်းထိုးခွင့် မ...
နာမကျန်းဖြစ်သည့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ငွေလှူဒါန်းရန်...
Cisco စာမေးပွဲကို ပြည်တွင်း၌ ဖြေဆိုခွင့်ရပ်နားထားသ...
Windows 8 Start Screen တွင် ပျောက်သွားသည့် Interne...
Android ဖုန်းများအတွက် ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာစာ SMS ...
ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့နယ် ပုလင်းရွာနှင့် သူကောင်းတည် ရ...
ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများတွင...
ဒမတ်စကတ် တိုက်ပွဲများတွင် အနိုင်ရရှိနေကြောင်း ဆီးရ...
ယီမင်နိုင်ငံမြို့တော် ဆာနားတွင် အီတလီ သံတမန် တစ်ဦ...